Sary tsy mitombina ho an'ny sarimihetsika mihetsika tsy misy | Famoronana an-tserasera
ny Ny fanandramana zavakanto dia mety mendrika antsika ho fomba fandalinana tsy misy antony lehibe noho ity. Ny iray amin'ireny dia mety maka sary maromaro avy amin'ilay antsoina hoe sarimihetsika mihetsika tsy misy tanjona mazava, tetika na fivoaran'ny toetra. Ireo andinindininy rehetra izay matetika mifandraika amin'ny famoronana sarimihetsika fohy na sarimihetsika.
Io no hevitra natsangan'i Mathias Zamecki izay mamorona sary samihafa ho an'ny frame tsy kisendrasendra avy amin'ny sarimihetsika mihetsika izay tsy misy marina. Misy hevitra samihafa mipoitra ao an-tsainy ary entiny mivoaka izy ireo nefa tsy manontany tena hoe inona no tadiavin'ireo olona roa miendrika vorondolo ireo eo an-tampon'ny havoana na inona no hanjo an'io maherifo io izay miatrika hala misy habe goavambe.
Zamecki dia manolotra ny antoka azo antoka seho natao tamina teknika tsara hitondra antsika amin'ny toe-javatra samihafa izay ahafahan'ny olona maka sary an-tsaina kely ary manolotra ny zavatra mitovy amin'izany mety hitranga amin'ny faritra sasany. Ity mpanakanto ity dia miorina amin'ny sarimihetsika sarimihetsika Studio Ghibli, izay, raha ny fanazavana, omaly Navoaka ny rindrambaiko fanentanana OpenToonz maimaim-poana.
Tsy misy fikasana intsony hitady fiaviana, toetra ary fahatsapana, Zamecki dia nanao fanandramana lehibe ho azy izay mety hiteraka mpanoratra mpanoratra mahita ny aingam-panahy ilaina hamoronana kofehy iraisana, ny fifanolanana ary ireo endri-tsoratra samihafa izay mety kintana amin'ny tantara ho an'ny sarimihetsika fohy na sarimiaina.
Fomba fanandramana manontany tena avy amin'ity mpanakanto ity izay nahavita nanao ny andiany fanoharana lasa virtoaly amin'ny Internet ary afaka mijery ny antsipiriany sy ny fidirana koa izahay ny facebook-nao hianatra momba ny tetik'asa vaovao ho avy ary raha afaka manome fiainana bebe kokoa an'io tantara niseho teo alohanay io sy ny toerana misy ireo olona roa sy ilay saka miatrika ny hala, dia afaka manome bebe kokoa ny tenany izy hamoronana ny tantarany manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sombin-kisendrasendra avy amin'ny sary mihetsika heverina ho aingam-panahy avy amin'ny Studio Ghibli